Semalt Expert: WordPress Security Matambudziko Munhu wese Anofanira Kuziva
Zvizhinji zvezvokutengeserana uye zvemasangano zviri kuenda paIndaneti. Somugumisiro, iyo inowanikwa paIndanetimunda uri kuve chinangwa chakanakisisa chevashandi ve-cyber kuti vashandise kurwisa kwavo. Vazhinji vezvemabhizimisi uye e-commerce webmasimani muridzi wega havaitivane zivo yakakwana uye unyanzvi hwokuvaka uye kugadzirisa mawebsite avo. Semugumisiro, vanosarudza nzira dzakadai sezvipi zvishandiso zve DIY uye kugadzirisa mapuratifomukufanana neGhostGator. Mazhinji ehutano hwehutano hwehutano, hwavanotenderera pane dzinosanganisira WordPress platform. ShokoPress rinosvika kusvika ku24% yezvosemawebsite munyika yose - ascot hat ladies. Izvi zvinoreva kuti vanotya vane danho guru rekutamba kuti vasangane nevashori vavo. Kuwana purogiramu yehuck-proofinowanzova kurota.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt Digital Services, inopa zvikonzero nei vanhu vachida WordPress. Chokutanga pane zvose, vane nzvimbo yakasununguka yepuratifomu pamwe chete nema plugins mazhinji, ayoanogona kuita mabasa makuru. Somugumisiro, WordPress inowanzoenderana nehuwandu hwehutungamiri hwehurongwa, hunoita kuti vanhu vagone kupinda mawebsite akawanda.Kunyange zvakadaro, WordPress haina kukanganisa. Kunyangwe kune vanhu vazhinji vanogadzira mawebhusayithi muShokoPress, vazhinji vechirangaridzoWordPress sites zvakare. Somuenzaniso, kana muchengeti akawana gomba muhutano hweShokoPress, kana mu plugin iripo ye WordPress,vanogona kukurumidza kushandura nhamba huru yekurwisa, iyo inogona kutumira mashoko evashandisi kana mamwe mashoko anokosha kune nzvimbo dzakavanzika.
Kudzivirirwa kubva kune spam
Vashambadziri vanhu vanoedza kubhadhara vanotambudzwa mukuita mamwe mabasa,asi chinangwa shure kwekuvanza hachisi chakanaka. Semuenzaniso, vamwe vanoita spammers vanogona kuedza kunyengedza vanhu kuti vaone kubatana kwepabonde. Mune imwedzimwe nguva, vangave vane mapeji anonzi phishing, anovapa zvakawanda zvakawanda zvekukosha. Mumazuva ano, spammers vanoshandisa zvinyorwa, izvo zvinemalware akaita seTrojans. Iwe unofanirwa kukurudzira vatengi vako kurwisana nemhando idzi dzekurwisa. Vanotsvaga vari shure kwezvese zvinopikisa spam. Vanogonavanoda ruzivo rwemashoni, ruzivo rwekadhi rechikwereti, kutonga webhutaneti kana zvimwe zvinangwa zvisina tsvina shure kwekurwiswa kwavo. Kushandisa zvigadziro zvehutanonokuti nzvimbo yako yepaiti inogona kuichengetedza pakurwisa kwakawanda.
Vanhu vanorwisa vanhu, mabhoti, uye mabhota
Pakugadzirisa kutyisidzira, zvinokosha kuziva kuti ndiani kana chiishure kwekurwa. Vanhu vanotambudza vanhu vanhu chaivo vanoita mabasa nechinangwa chavo mupfungwa. Bots iri nyore software semabhoti,iyo inomirira munhu mukuita basa. Ukuwo rumwe rutivi, bhotela rine ruzivo rwevhoti zhinji, semamiriyoni, anogona kutumirwakurwisa kushandiswa kwakasiyana-siyana uye kupa migumisiro kumunhu anotengesa mune imwe nzvimbo.
Kuchengetedzwa kwewebsite yako uye yevashandi vako kunotendererazvakanyanya pamusoro pako seya admin. Paunenge uchigadzira mawebhusayithi, hatina hanya nezvinoitika zve-cyber-crime, izvo zvinogona kuita kuti e-commerce yewebsite inetsekepasi. Maitiro akawanda eSOO anorasikirwa nemaoko evashambadzi avo vanobatsira makwikwidzi kuburikidza nekusvitsa makwikwi asina kururama. Mamiriro ezvinhu anowedzeraneWebsitePress websites, zvikurukuru nokuti hutano hwavo hunozivikanwa kwavari. Uyezve, WordPress ine nhamba yakakwirira yemasayiti. Vamwemaitiro, izvo zvinogona kuzvidzivirira muShokoPress zviri munhungamiro ino. Iwe unogonawo kuvimbisa kuchengeteka kwechitima chako, vashanyi pamwe chetesekuwedzera SEO muGoogle kuburikidza nekuchengetedzwa kwekuchengeteka.